ရွှေကျောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ရွှေကျောင်း
Posted by ムラカミ on Jun 17, 2012 in Photography | 29 comments
မဆဲလည်း အနီကတ်လေးဒွေ ရဲနေအောင် ကြည့်ရမှာ မြင်ယောင်သေး…
သည်တခါတော့ ရွှေကျောင်းပုံတွေ တင်သေးတာပေါ့နော…
ပုံ ၅၀ဝကကျော်ပြီးနောက်မှာ ကျနော် ့ကင်မလာ သေလိုရူးသလိုဖြစ်နေလို့
ကျနော်ပြန်လာမှာပါ ….ဒါပေသိ ..နည်းနည်းတော့ အချိန် ကိုးလို့ကန့်လန့်ဖြစ်မယ် ထင်တယ် ပိတ်သတ်ကြီးရေ..
(ဟမ် …စိတ်ထိ်န်းပါဦးလား နင့် ဘယ်သူ့မှ အားမပေးတာ မသိလေရော့သလား အေ. .. ငတုံး…)
ဂလိုလေး လုပ်စားရတာ နော့်… သဂျီးပိုက်ပိုက်အိတ်သည် အန်းတိမမျှော်လင့်ချက်..
မကြည့်ချင်လည်း နာမည်မြင်ကတည်းက လိမ့်ဗျာ…
အိုဘယ့် သုံးဇယ် …
(ကော်ပီရိုက် အသက်မဝင်သေးတော့ ဘာမှ အကျုံးမဝင်ဘူးပေါ့အေ…)
လစ်ဘရယ် ဒီမို သဂျီးကလည်း ဆုတောင် းတာ တကြိုက်ဝူး ဆိုတော့
ဝိနည်းလွတ်….ဆုမတောင်းဘူး ကျိမ်ဘဲ ကျိမ်မယ်…
ရိုဟင်ဂျာ နဲ့ ညားပါစေတော်….
(၆၃မကျတဲ့ပုံတွေမို့ မကူးမှန်းလည်း သိပါရဲ့ ..)
အတည်အခန့် ကင်းကကုဂျိ အကြောင်း ပွားချင်တဲ့လူတွေရှိရင် အတည်အခန့်ပြန်လည် ဖြေပေးမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့
ဒါ့ပုံပညာအကြောင်းဆွေးနွေးလိုတာတွေရှိရင်လည်း … မကွယ်မဝှက် ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာကို ဖြေပေးမှာ ဖြစ်ကြောင်း
ရွှေကျောင်းကြည့်တဲ့လူတွေ ဘော်ဘီစော်ခါနဲ့ညားပါစေလို့မကျိန်တာ..
အဲဂလို ကျိန်လို ့ဂဒေါ့ လာကြည့်သမျှလူနဲ့အုဗိုုက်နဲ ့က ဖိုက်တင်ဘဲ..
အုဗိုက်ရဲ့ ဘော်ဘီလေးကို ထိ ဓါးကြည့်ပဲ..
အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဇိမ်ရှိလှမဲ့အမျိုး..အဟိုး..ဟိုး..
(ဟီဟိ ကောင်းလိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံဝေဘန်ချက် ဓာတ်ပုံပညာကိုတော်တော်လေ့လာထားတာ)
ရိုဟင်ဂျာ ၁၆နှစ်မသန့်သန့်လေးတွေက.. ၅ယောက်တပြိုင်ထဲ.. မယားစရိတ်တာဝန်မယူပဲ.. သိမ်းပိုက်နိုင်ပါတယ်…တန်းစီနေရင်..မြန်မာလူပျိုကြီးတွေ…ငြင်းကြမှာလားဟင်င်…
အောက်ဆုံးပုံက..ဟိုခေါင်မိုးအစွန်း.. ဟိုသစ်ကိုင်းအချိုး.. ဟိုထိပ်နဲ့.. ဟိုအတံနဲ့.. ချိန်ကိုက်နေအောင် ..တမင်နေရာယူရိုက်ထားတာလား.. သိချင်ကြောင်း..
အဲ့ ရောက်တော့ သူများ မရိုက်ဖူးသေးတဲ့ အန်ဂယ် လိုက်ရှာရင်း
ပြောရရင် …အချိန် ပေးလိုက်ရတဲ့ပုံ ဆိုပါတော့
လို့ တခါတည်း ဖြောင့်ချက် ပေးခဲ့ပါကြောင်း…
ပုံတွေကို လူသိရှင်ကြားလည်းတင်သေးရဲ့ …
သူ့ပုံမှန်းလည်းသိအောင် နာမည်ကိုလည်းပြူးပြဲနေအောင်ရေးထားသေး ..
ကူးတော့လည်းမကြိုက် … အဲလောက်စိတ်ပုတ်မှတော့
ရိုဟင်ဂျာမလေးတွေ (သဂျီးပြောတဲ့ ၁၆နှစ်ပဲထားပါတော့) နဲ့ အမှန်အကန်ညားပါစေတော်
သောက်ညင်ကပ်တဲ့ ပုဒ်မနဲ့ လျှောက်မေးအုန်းမယ် ။
ရွှေကျောင်းဆိုလို့ပါ။ ရွှေအစစ်နဲ့ သုတ်ထားတာလား။ သက်တမ်းဘယ်လောက်ရှိပြီတုန်း။ အထဲမှာ ဘာတွေရှိလဲ ။ ဆင်းတုတော်တွေပဲလား။ ဆုတောင်းစာတွေ ဘာတွေ ရော ရှိလား ။ အဆောင်တွေရော မဝယ်ခဲ့ဘူးလား။ ဘယ်ဘုရင်လက်ထက်က ဘာကြောင့် ဘယ်သူက တည်ခဲ့တာလဲ။ ထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေ ဘာတွေရော မရှိဘူးလား။
၅ နဲ့ ၆ ကို အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ပါကြောင်း။ မိုးမြေရေ စုံနေလို့။
ရွှေကျောင်းဆိုတာ ပြတိုက်လား ဘုန်းကြီးကျောင်းလား…
ရွှေကျောင်းဆိုလို့ ကိုဂီ မြန်မာပြည့်ပြန်ရောက်နေတာလားလို့…..
၂.၄.၅ အကြိုက်ဆုံးပဲဗျို့…….ရေရောင်ပြန်ဟပ်တာလေးတွေကလည်း တစ်မျိုးဖမ်းစားနိုင်လို့ပါ..
တကယ်က ကျနော် ဆန်းဆက်နေခဲ့သင့်တာဗျ….
တခြားနေရာတွေ သွားမလို့ပဲ …..
မေးရအောင် ဓါတ်ပုံကို အဖြစ်သဘောဘဲ ရိုက်တတ်တော့
ဒို့ ရွှေတိဂုံလို မဟုတ်ပေါင်။
မှတ်သား လောက်တဲ့ ဟာပါပဲ ခင်ဗျ ..။
ရွှေကျောင်းပုံလေးတွေ အားပေးသွားပါတယ်။ ရှုခင်းလေးတွေ ဂွတ်တယ်။
လား ပေါင်းမြောက်မြားစွာနဲ့ ဦးဏှောက်ခြောက်သွားပါကြောင်းးးးးးးးးးးးးးး
ပြန်လာရမလား ပြန်မလာရဘူးလား ?????????????????????
ဆစ်ဂနစ်ချာ ဖရီး ဗားရှင်း ရှိပါသေးတယ်ဗျာ….
ဟိုဆြာတွေ လုပ်သလို လုပ်ကြည့်တာပါ…
အိုဟိုင်းရိုး ( ဒါတ်ပုံ တွေက ) ဂိုဇိုင်းမတ်( စ ) ( လှတယ် ) ၊ ဝါ့တားရှိဝါ့ ( ကျွန်တော်က ) နေတိုးဒဲ့ ( စ ) ( ဒါတ်ပုံဆြာ တော့ ဟုတ်ဘူးဗျ! ) ၊ ဟဲဟဲဟဲ၊၊၊နောက်တာနော်! ဆာရိုးနာရာ့ ! ( ချိတ်ချိုးရဘူး )ဟဲဟဲဟဲ၊၊၊
ထင်းရှူးပင်တွေနဲ့ လှပတဲ့ ဂျပန် ရွှေကျောင်းရယ်…
နှုတ်ခမ်းအစူ ခံပီးတော့ ရင်ထဲမကောင်းစွာနဲ့
1…တိမ်နောက်ခံနဲ့ ရွှေကျောင်း အမြင်ရှင်းရှင်းလေး
2…ထင်းရှူးပင်တွေရယ်၊ ရေပြင်ထဲက အရိပ်နဲ့ ရွှေကျောင်း လှပနေတာလေးတွေ ကြိုက်တယ်…
3…အဲ့ ထင်းရှူးကိုင်းကို အလယ်ကန့်လန့် တမင်ဖြတ်ရိုက်ထားတာလား…
ရွှေကျောင်းလွတ်အောင် အပေါ်မြှင့် ရိုက်ထားတဲ့ပုံရှိရင်လဲကြည့်ချင်ပါတယ်…
ကူးပါခင်ညား … ရွာထဲကလူတွေအတွက်တင်တာပဲဟာ …
ရွှေကျောင်းဆိုလို ့ဝင်ကြည့်မိတာ ဘာများလဲလို ့
တကယ်တော ့တရုတ်ရှောင်လင်ကားထဲက ပါနေကျနေရာတွေကိုး
အကာအရံသာမက တိုင်၊ မျက်နှာကြက်၊ လက်တန်းအာလုံးကို ရွှေဆေးသုတ်ထားလိုက်တာ အထူးသဖြင့် မျက်နှာကြက်ကိုပါ ရွှေရောင်သုတ်ထားလို့ ဆလိုက်မီးထွန်းသလိုပါဖြစ်ပီး ပိုဆွဲဆောင်မှုရှိသွားတယ်ထင်ပါတယ်။ အဆောက်အအုံ ဗိသုကာပညာကလည်း စပါယ်ရှယ်မို့ အလှပေါ်အယဉ်ဆင့် မောင်ဂီ့ဖင်ဝင်ငရှဉ့် ဆိုသလို ထွန့်ထွန့်လူးသွားရဗာဂျောင်း….